I-china nylon pulley eyenzelwe umzi mveliso welifti kunye nabathengisi IH & F. nylon
Isinyusi se-nylon sisetyenzisiwe kwizixhobo zekheshi amashumi eminyaka ukulungiselela ukufaneleka kokuthambisa, ubunzima bokukhanya kunye nokukhuselwa kwentambo yocingo. Ngaphezulu kwe-80% yeepleyiti zelifti zisebenzisa izinto zenayiloni kwaye zinokufumana ubomi obuninzi benkonzo yezixhobo ezipheleleyo. Njengolawulo lukarhulumente olungqongqo ngakumbi kushishino lwentsimbi kungcoliseko lwalo kwindalo esingqongileyo, iipeleyiloni zenylon ziya kusetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zelifti.
Kwaye emva koko sizisa iinkcukacha ezithile eziqhelekileyo zekhetshi yenylon pulleys:
I-MC Nylon ifake isicelo kwi-Elevator pulley
Ngaphezulu kwe-95% yeNylon kunye ne-5% yezinye izinto
∅520 * ~ 140 * 100
*520 * ~ 140 * 110
*520 * ~ 140 * 120
*520 * -130 * 100
*520 * -130 * 110
*520 * -130 * 120
I-406 * -110 * 100
I-406 * -120 * 100
I-406 * -130 * 100
Thina, uHuafu sizamile ukukhokela, ukweyisela abathengi bethu ukuba bazame iiplleys zezinto zeNylon endaweni yezi pulleys zentsimbi. Abathengi abaninzi basebenzise ukufaka iipulley zenylon emva kokuvavanya zonke iinkcukacha zamavili enayiloni. Kuya kufuneka ukuba babe sele beziqhelanise neepulley zenylon kwiintetho zethu zamva kubathengi bethu. Kwaye bathi abasebenzi babo bathanda ukufaka iiplastile zenayiloni zokufaka iipulleys ze-nylon ukunciphisa amandla abo emisebenzi, ukugcina ixesha labo lokusebenza ukwenza umsebenzi ongaphezulu. Kwaye banokuba nexesha elininzi lokuphumla lokufaka iipulley zenylon ukuphucula ukusebenza ngokukuko konke.
Njengokuba ixesha liqhubeka, abathengi abaninzi nangakumbi baqala ukuqonda izibonelelo zeepulley zenylon kwaye bazimisele ngakumbi ukuzama iimveliso ezintsha ukuphucula lonke inqanaba leemveliso zabo kwimiba yokhuseleko, ukulungeleka, umgangatho. Kwaye siyakholelwa ukuba iipeleyiloni zenylon ziya kuba nesicelo ngakumbi kumzi mveliso we-lifti.
Egqithileyo Inayiloni Pin kunye nobulukhuni obuphezulu- H & F. nylon
Okulandelayo: Izixhobo zenayiloni zoomatshini